Home » Kabaha » Janaayo 2016 20% Xayaysiinta Shoes.com Ku Saabsan 1 / 15 / 16
Janaayo 2016 20% Shirkadda Shoes.com
Qaado 20% Daaro amarrada $ 99 ama More!
Isticmaal Xeerka Promo: FRESHSTART20 – Valid 1/1/16-1/15/16
Qaado 20% dalabkaaga $ 99 + at Shoes.com! Isticmaal kood: FRESHSTART20. Soo bandhig xNUMX / 1-1 / 1.
Kabaha haweenka ee ugu sarreeya: Tababaraha ISO-ga ee Tabcoon
ISO-ga Sumconi wuxuu ku shaqeeyaa khafiifinta miisaanka fudud ee iBR + ™, XT-900 ™ dib udhigista, iyo dardar gaaban, oo leh fudfudud yar oo leh PWRGRID + EVA oo lugta lagu yareeyey. Hagaha 9 wuxuu leeyahay wax kasta; ugu dambeyntii dhismaha boogta iyo cusbooneysiinta wax soo saarka. ALLOUNUN wuxuu leeyahay barkad xajin badan oo waxtar u leh taasoo u keenta cagahaaga si aad u ilaaliso kaadidaada inta u dhaxaysa cagtaada iyo dusha sare.
Kabaha Casriga Ragga: Asics GT-2000
Dhismaha khafiifinta ee cusbooneysiinta ASICS GT-2000 ee ku shaqeynaya kabaha ayaa kuu ogolaanaya inaad dareento sidii aad hawada u socoto. Diyaarinta taageeridda iyo hagista tartanka dhexdhexaadiyaha ah ee tartanka isboortiga, kabaha ragga ee rukunka ah waxay ku foogan yihiin siyaabo badan oo waxqabadka sare, laga bilaabo FluidRide ™ bartamihii dhexdhexaadinta iyo boogta si ay u noqdaan Dynamic DuoMax® si loogu helo xasilooni iyo taageero dheeraad ah . Rearfoot iyo gawaarida GEL® waxay bixisaa cadaadis dheeraad ah markaad ka gudubto wareegga wareegga, halka Qalabka Korjoogtada ah ee Korontada ™ uu hagaajin doono taakulada iyo taageerada. Goobta dibedda ah ee cirifka lagu xiro waxay ka caawisaa inay socoto muraayad ammaan ah, mile ka dib.